सामाजिक सुरक्षाको नाममा कम्युनिष्टले देश डबाउने दीक्षितको भविष्यवाणी – Pahilo Page
सामाजिक सुरक्षाको नाममा कम्युनिष्टले देश डबाउने दीक्षितको भविष्यवाणी
१२ मंसिर २०७५, बुधबार २०:३५ 532 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १२ मंसिर । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारले हिजोबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएपनि यसको दीर्घकालीन नतिजा भने डरलाग्दो रहेको खतरा औंल्याएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. दीक्षितले भने, ‘‘यो कार्यक्रम लागु गर्नको लागि अबको दुई वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ भनिएको छ । नेपालमा हामी अहिले रामराज्यमा त छैनौं । हामी नेपालीहरुमा भ्रष्टाचार कति छ ? यो तपाईहरुलाई थाहा छ । यो भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको ठाउँमा डेढ खर्ब रुपैयाँ कसरी जम्मा हुन्छ र त्यसमा क–कसको गिद्धे नजर लाग्ला भन्ने कुरा त्यो तपाईहरुले विचार गर्नुहोला ।’’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘‘त्यो पैसा जुन उद्देश्यले जम्मा भएको छ । त्यतापट्टि जाला कि नजाला ? भन्ने कुरा ठूलो–ठूलो प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ । यो म किन भन्दैछु भनेदेखि नागरिक लगानी कोष भनेको यसमा सिम्पल नागरिकको पैसा परेको हो । तर, अहिले भर्खरै वाइडबडी एयर क्राफ्टको कुरा आएको छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोषको भयङ्कर ठूलो पैसा परेको छ । त्यो यसरी हेर्दाखेरि डुब्दैछ । किनभने नेपाल एयरलायन्स त डुब्दैछ । मन्त्रीज्यूले जे जति अहिले यहाँ भने तापनि फ्याक्ट त यो छ कि नेपाल एयरलायन्स अहिले पूर्ण रुपमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । ऊ अब पैसा नभइकन उठ्ने अवस्थामै छैन । त्यो पैसा कसले दिने ? र कहाँबाट आउने भन्ने कुरामात्रै हो ।’’
दीक्षितले नेपालमा जुन–जुन सरकार आएपनि गिद्धे आँखा चाहीँ त्यही लगानी कोषमा हुँदो रैछ भन्दै थपे, ‘‘अहिले हेर्नुहोस इन्सुरेन्समा पनि त्यही छ । हजार रुपैयाँ पर्ने कुरामा दश हजारको बिल आउँछ । सबैको मिलोमतो छ ।’’ त्यस्तै उनले आज नेपालका हरेक पार्टीका ट्रेड युनियन रहेको सुनाए । उनले भने, ‘‘ट्रेड युनियन हुनुहुँदैनथ्यो ।’’
निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो छ र यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुनाउँदै उनले भने, ‘‘उनीहरुले राम्रो भने । तर, यसको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’’ उनले आखिरमा नेपाल ४, ५ वा ६ वर्षमा टाँट पल्टिनेपनि खतरा औंल्याए । उनले भने, ‘‘त्यो लगानी कोष छ, त्यो विल्कुलै टाँट पल्टिन्छ ।’’ उनले ३४ लाख ८ हजार कर्मचारी एकैचोटी आन्दोलनमा गए भने के हुन्छ भनेर प्रश्न समेत सोधे ।
डा. दीक्षितले भने, ‘‘अनि नेपाल सरकारले पैसा लिनुपर्छ । कहाँबाट ? विदेशबाट । त्यो रकम सबै सरकारले त दिँदैन । कम्युनिष्ट सरकार रह्यो भने उसले कम्युनिष्ट मुलुक नै खोज्छ । अहिले कम्युनिष्ट मुलुक त चीन नै हो । चीनले लगानी गरिदिन्छ । पैसा पनि दिन्छ । तर, डर कहाँ छ भनेदेखि अहिले संसारभरि परेको छ कि चिनियाँहरुले आरामसँग पैसा हालेका छन् । तर, पैसा फर्काउन नसक्ने मुलुकहरु ‘डेब्ट–ट्रयाप’मा परेका छन् । उनीहरु ऋणको जालोमा परेका छन् ।’’
श्रीलंकाजस्ता देशले पनि चीनको पैसा तिर्न नसकेर उसको कति भू–भाग त चीनलाई ९९ वर्षलाई लिजमा दिनुपरेको दीक्षितले सुनाए । उनले थपे, ‘‘हामीले अब बाहिरबाट पैसा लिँदा पनि चीनकै पैसा लियौं भने तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । नतिर्ने बितिक्कै मुलुक चाहीँ हाम्रो डुब्छ ।’’ चीनको ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकाले त भूभाग डुबाएको तर नेपालले त देश नै डुबाउने उनले खतरा औंल्याए ।
त्यसपछि मुलुक विकाउमा जाने उनको भनाई छ । दीक्षितले भने, ‘‘अहिले होश पुराउने अवस्था आएको छ । सरकारले कुरा त गर्यो तर दीर्घकालीन रुपमा यसको नतिजा असाध्यै–असाध्यै डरलाग्दो छ । त्यसैले अहिले सबैले होश गर्ने बेला छ । हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो मुलुकलाई विदेशीको पैसामा हामी नबिकौं ।’’